Uyenza njani iWatermark ngePhotohop ngokukhawuleza | Izidalwa ezikwi-Intanethi
UPablo Gondar | | Photoshop, Izibonelelo, Tutorials
Njani yenza i-watermark ngePhotohop ngokukhawuleza ukufumana khusela zonke iiprojekthi zakho zemizobo lwalo naluphi na uhlobo lokukopa. Kuqhelekile ukufumana ii-watermark kwiifoto ezibonelela ngokhuseleko olongezelelekileyo kuzo zonke iintlobo zezinto ezibonakalayo, kuba kuluncedo kakhulu ukufezekisa gqamisa umbhali yomfanekiso kwelinye icala kwaye ikhusele kwelinye icala.
Funda uku yongeza i-watermark ngokukhawuleza kwaye ngokulula kuwo wonke umsebenzi wakho wokuzikhusela kwiinethwekhi ekubanjweni kwemifanekiso. Kuyinyani ukuba sinokufumana iifoto ezininzi kuthungelwano apho ii-watermark zingasasebenzi kangako kuba nabani na ofuna ukuba umfanekiso enza njalo ngandlela thile, kusenomdla ukongeza i-watermark kuyo zivelele njengabaculi kuyo yonke imisebenzi yethu.
Ukongeza i-watermark into yokuqala ekufuneka siyenzile kukuba nayo umfanekiso esiya kuwusebenzisa njenge-watermark, Eyona ixhaphakileyo kukusebenzisa logo okanye typography enegama lombhali. Inethiwekhi singayifumana iintlobo ezininzi zamanzi ezahluka ngokuxhomekeke kumzobi, kukho amagcisa akhetha ukusebenzisa i watermark elula nefihlakeleyo kakhulu kwaye abanye bakhetha iwatch ehlala umfanekiso wonke, kwinqanaba lomntu ndikhetha i watermark Ubuqili kakhulu obungabonakali kakhulu emfanekisweni.
Ngokubanzi, i-watermark ineempawu ezilandelayo:
Uye ukukhanya okuncinci
I-inki enye (mnyama okanye mhlophe)
Sikhangela okanye senze umfanekiso esiza kuwusebenzisa njenge watermark kwaye kamva siza kuyivula Photoshop.
Nje ukuba ilogo yethu ivulwe Photoshop into elandelayo ekufuneka siyenzile yile yehlisa opacity kwaye ugcwalise pUkwenza icace gca. Into eqhelekileyo (eyona ixhaphakileyo) kukuba i-watermark ine-opacity ephantsi kwaye igcwalise, ifezekisa tsala ingqalelo encinci.
Nje ukuba sithobe i-opacity kunye nokuzaliswa kwelogo yethu, into elandelayo ekufuneka siyenzile bhala kwakhona ukuze ikwazi ukumelana nayo isikali esinyeSigqiba ubungakanani ngokweemfuno zethu. Ukutshintsha ubungakanani be logo yethu kufuneka siye kwimenyu ephezulu ye Photoshop kwaye ujonge ukhetho lwe umfanekiso / ubungakanani bomfanekiso.
Kunconywa kakhulu soloko usebenzisa isitayile sewatermark Ukuze wenze umgca wokuyila ohlala ufana, kufuneka thintela ukuba namawaka eentlobo zamanzi kodwa ngokulula uhlala usebenzisa okufanayo kuyo yonke imifanekiso yethu.
Nje ukuba sitshintshe ubungakanani bew watermark yethu, into elandelayo ekufuneka siyenzile yile gcina umfanekiso kwifomathi yePNG ukuze ingabinalo naluphi na uhlobo lwemvelaphi kwaye iyisebenzise ngaphandle kweengxaki.
Emva kokugcina i-watermark yethu kwifomathi yePNG siya kuba nakho ukuyisebenzisa ngaphandle kwengxaki kuzo zonke iifoto zethu. Ukusebenzisa i-watermark, konke okufuneka sikwenze tsala umfanekiso ukuvula ukufota kwi Photoshop.
Kwimizuzu nje embalwa sifundile yenza eyethu watermark, yinkqubo ekhawulezileyo kwaye eluncedo enokusinceda ukuba sikhusele ngcono kwaye sigqamise wonke umsebenzi wethu wegraphic.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Tutorials » Uyenza njani i-watermark ngePhotohop